तिथि मेरो पत्रु »7अनलाइन डेटिङ तपाईं निकाल दिए प्राप्त गर्न सकेन Freaky कारणहरू
हरेक उहाँले काम समयमा match.com थियो किनभने डिब्बा भयो जो कि एक मान्छे को सुन्नुभएको छ. तपाईं काम गर्दै छन् जब तपाईं आफ्नो डेटिङ वेबसाइट मा हुनु हुँदैन. यो तपाईं त्यहाँ भएको परवाह छैन भन्ने आभास दिन सक्छ, वा तपाईं यहाँ गर्न चाहँदैनन् कि तपाईं सफा आफ्नो नाक राख्न र तपाईं अनलाइन कसैसित भेटघाट गर्दा समस्या बाहिर रहन मदत गर्नेछ केहि सुझाव हो कि तिमी र अझै पनि काम मा राम्रो तरिकाले गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो काम पछि पर्नु
सुरु लागि, तपाईं सधैं समय मा हुन चाहनेछन्. तपाईं डेटिङ अनलाइन को लागि निकाल गर्न सक्थे एउटा कारण पनि तपाईं आफ्नो इनबक्स जाँच काम मा इन्टरनेटमा हुनुको संग के छैन. तपाईं समस्या को बाहिर बस्न चाहन्छन् भने, आफ्नो खाजा खाने मा आफ्नो सन्देशहरू जाँच वा तपाईं घर पुग्दा. काम लागि ढिलो नगर्नुहोस्.
तपाईंको मालिक तपाईं इंटरनेट मा आफ्नो समय बर्बाद सोच्छ
तपाईं रही अन्त सक्छ कि अर्को कुरा अनलाइन डेटिङ को लागि निकाल काम मा आफ्नो डेटिङ वेबसाइट इनबक्स जाँच छ. तपाईं काम गर्न छन्, आफ्नो सामाजिक जीवन मा जाँच हुँदैन. आफ्नो इनबक्स जाँच महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईं एक तोडने वा तपाईं काम छैन अर्को समय मा जब यो गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ. अन्यथा, आफ्नो मालिक तपाईं इन्टरनेटमा समय बर्बाद भन्ने सोचाइ सक्छ, र तपाईं फायर र कसैले भर्ती अन्त गर्ने “इन्टरनेटमा सबै समय छैन।”
तपाईं केहि लुकाइरहेका छन् भने तपाईं हेर्न
तपाईं पनि सधैं आफ्नो व्यवहार मानिन्छ कसरी सजग हुनुपर्छ. तपाईं कार्यस्थल मा केहि ढाकछोप गर्ने प्रयास अनौठो अभिनय गर्दै भने, आफ्नो मालिक तुरुन्तै केहि शङ्का, र त तपाईं मा एक नियाल्नेछन्. एउटा सरल भौचर-माथि र BAM, तपाईं गएको छौं.
तपाईं पर्याप्त लचिलो छैनन्
अनलाइन डेटिङ अर्को महत्वपूर्ण भाग लचिलो छ हुनु र एक सफल व्यापार जीवन भएको. तपाईं आफ्नो अनुसूची एक बिट पुन: मिलाउन हुन सक्छ, तर आफ्नो मालिक साँच्चै सकियो केहि को आवश्यकता भने, तिनलाई लागि समय बनाउन.
तपाईं आफ्नो काम मा ध्यान छैन
तपाईं पनि तपाईं मा लागिरहेका छन् प्रयास गर्न ध्यान दिनुपर्छ. के तपाईं कि तातो मिति गर्न लगाउने के हुनेछ सोचिरहेका छन् जब तपाईं आज रात, तपाईं आफ्नो काम मा ध्यान केंद्रित छैन, र आफ्नो पूर्ण क्षमता मा गरेनन्.
तपाईं अनलाइन आफ्नो रोजगारदाताले badmouth
साथै, तपाईं कम्पनी badmouth कहिल्यै गर्नुपर्छ, पनि आफ्नो अनलाइन डेटिङ गर्न. आफ्नो कम्पनी यस बारे पत्ता भने, यो आफ्नो काम देखि आफ्नो बर्खास्तगी परिएला, र कुनै एक चाहन्छ कि. आफ्नो कार्यस्थल सकारात्मक बारेमा सबै विद्युतीय टिप्पणी दिनुहोस्.
तपाईं मान्छे को गलत प्रकारको घुलमिल
अन्त, तपाईं बस सामान्यतया समस्या बाहिर रहन प्रयास गर्नुपर्छ. मान्छे को गलत प्रकारको घुलमिल तपाईं निकाल रही सक्छ. यी सुझाव पछि दुवै आफ्नो रोमान्टिक र व्यावसायिक जीवन मा तपाईं सफल बनाउन हुनेछ.